Sergio Aguero Oo U Sii Dhaaranaya Manchester United iyo Ballan Uu Ku Qaaday Goolal Uu Dhaliyo
HomeWararka MaantaSergio Aguero Oo U Sii Dhaaranaya Manchester United iyo Ballan Uu Ku Qaaday Goolal Uu Dhaliyo
Sergio Aguro ayaa rajaynaya in Axadda uu soo afjari doono abaarta ka haleeshay gool dhalinta, isla markaana uu goolal ka dhalin doono kulanka ay isaga hor iman doonaan Manchester United oo ka dhici doona garoonka Old Trafford.
Weeraryahankan Manchester United ayaa ku banjaray 19 gool oo uu wakhti horeba gaadhay, laakiin haddana marka la eego sida ay ahayd gool dhalintiisu ma xuma, waayo 19 gool ayuu dhaliyey 20 ciyaarood oo uu u saftay kooxdiisa, balse mushkiladdu waxay haleeshay lixdii ciyaarood ee u dambeeyey oo aanu wax goolal ah dhalinin.
26 jirkan u dhashay wadanka Argentine waxa ay abaartu haleeshay 556 daqiiqadood oo aanu wax goolal ah dhalinin isaga oo garoonka ku jira, taasina waxay keentay in hoos u dhac uu ku yimaado Manchester City oo hadda ku jirta kaalinta afraad.
Aguero oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu usii dhaartay Manchester United oo uu ballan ku qaaday in uu goolal ka dhalin doono, isla markaana uu garoonka Old Trafford ku soo afjari doono masiibada ka haleeshay gool dhalinta.
“Mar kasta waan jecelahay in aan goolal dhaliyo, haddana dabcan way ka sii wanaagsan tahay markaad ciyaar weyn dhaliso. Haddii aad gool ka dhaliso Manchester United oo joogta Old Trafford, farxad ayay kuu noqonaysaa, sababtoo ah waxa aad dareemaysaa cadaadiska jewiga inta badan ay garoomadu la aamusan yihiin, waxaanay ku dhamaanaysaa waalli.” Sidaas ayuu yidhi Aguero.
Aguero waxa uu sheegay in marka ay taageereyaasha kooxdiisu la garab taagan yihiin taageerada iyo qaylada ay dhiirigelin ku abuuraan, waliba marka ay heesayaan.
Xiddigan reer Argentine waxa uu aaminsan yahay in Manchester United oo guuleysatay shantii kulan ee u dambeeyey ee horyaalka Premier League in ay kooxdiisa City soo qaban doonto, isla markaana ay kaalinta saddexaad City ku dhamaysan doonto.
Guus Hiddink: Waa xaqiiq inay Chelsea qarka u saaran tahay inay daadegto